Madaxweyne Siilaanyo oo cafis u fidiyay siyaasiyiin iyo odayaal kasoo jeeda Somaliland ee ku sugan Muqdisho – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Madaxweyne Siilaanyo oo cafis u fidiyay siyaasiyiin iyo odayaal kasoo jeeda Somaliland ee ku sugan Muqdisho
Madaxweynaha maamulka Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud (Axmed Siilaanyo) ayaa cafis u fidiyay siyaasiyiinta iyo odayaasha ku sugan magaalada Muqdisho ee kasoo jeeda deegaanada gobolada waqooyi ee Somaliland.
Cismaan C/laahi Saxardiid oo ah wasiirka warfaafinta ee maamulka Somaliland oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in cafiska madaxweyne Siilaanyo uu yahay mid loogu daneynayo siyaasiyiinta ku sugan Muqdisho, maadaama ay arkeen inaysan waxba u oolin magaalada Muqdisho.
Wasiir Saxardiid ayaa sidoo kale sheegay in Somaliland ay diyaar u tahay in xitaa ay diyaarado u diraan magaalada Muqdisho, si halkaasi looga soo daabulo siyaasiyiinta iyo odayaasha uu ku sheegay inay ku hungoobeen Soomaaliya.
Wuxuu ugu baaqay siyaasiyiintaas iyo odayaasha dhaqanka ee kasoo jeeda Somaliland islamarkaana ku sugan magaalada Muqdisho in xukuumadda Somaliland ay diyaar u tahay inay daad-gureyn doonto, hadii aysan imaan karin deegaanadooda.
Dhinaca kale, arrintaan ayaa soo baxeeysa iyadoo siyaasiyiinta iyo odayaasha beelaha waqooyi ay qaadaceen qaabka loo qeybiyay xubnaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya, waxaana iska muuqata in maamulka Somaliland uu doonayo inuu ka faa’iideysto xaaladda haatan taagan.
Hadalkaan kasoo yeeray madaxweynaha maamulka Somaliland Axmed Maxamed Siilaanyo ayaa noqonaysa markii u horeysey ay Somaliland ku dhawaaqdo inay cafis u fidisay qofkasta oo degaanadaasi kasoo jeeda oo Muqdisho u tegay midnimada Soomaaliya.
Si kastaba ha ahaatee, ilaa iyo haatan lama oga in siyaasiyiinta iyo odayaasha boqolaalka ah ee Somaliland kasoo jeeda ay mar qura uga tagaan Muqdisho, iyadoo qaarkood ay haatan weli xilal iyo dhaqaale ku heysta metelaadda gobolada waqooyi ee la magac baxday Somaliland.